Kuvaka nyowani yekuvandudza pateni Simbi yakanaka inofanira kushandiswa pa "blade" -Kubvunzana naLuo Tiejun, Mutevedzeri weMutungamiri weChina Iron uye Simbi Sangano - China Foshan Hermes Simbi
Kugadzira nzira nyowani yekuvandudza Simbi yakanaka inofanira kushandiswa pa "blade" -Kubvunzana naLuo Tiejun, Mutevedzeri weMutungamiri weChina Iron uye Simbi Sangano.
"Pasi pemaitiro matsva ekuvandudza, indasitiri yesimbi inofanirwa kutora mikana mitsva mune ramangwana kubva pakuumba chitsva chekupa mudzimba uye kudiwa uye kutora chikamu mukudyidzana kwepamusoro soro uye kukwikwidza." Luo Tiejun, mutevedzeri wemutungamiri weChina Iron and Steel Association, akadaro mukukurukurirana kwakasarudzika neXinhua News Agency nguva pfupi yadarika. Kunatsiridzwa kwekushandurwa-kweruvara rwekugadziriswa kweiyo "yegumi neshanu-Yegore-rehurongwa" yakaramba muyedzo wekushushikana kwegore rakakosha ra2020. Iyo indasitiri yesimbi, iyo yakamira panzvimbo nyowani yekusimudzira, icharamba ichigadzirisa zvine mutsindo uye zvishoma nezvishoma kunatsiridza hunyanzvi hunyanzvi hweindasitiri uye nhanho yemazuva ano yecheni yeindasitiri. Tora hunyanzvi hwesainzi uye hwetekinoroji senzvimbo yekutangira yekuvandudza mhando uye padanho rekupa, uye rega simbi yakanaka ishandiswe mu "blade".
"Handina kuzvitarisira!" Luo Tiejun akayeuka gore rapfuura ra2020, "Ndiri kunetseka chaizvo kuti kambani hombe yekambani ichatsemuka uye indasitiri icharasikirwa nemari. Nekudaro, hapana kurasikirwa mumwedzi. Ingori nyaya yemubereko wakadii. ”
China Iron and Steel Association data inoratidza kuti mu2020, iyo purofiti yemakambani esimbi akaverengerwa mune akakosha manhamba anga achiwedzera gore-ne-gore kubva munaJune, uye huwandu hweaseti-yechisimba hwakaramba huchidzikira gore-gore. Yakazara purofiti inowanikwa mugore rese yakachengetedza kukura.
"Mugore rapfuura, kusimukira kwehupfumi hweChina kwakapa kuti indasitiri yesimbi ipfuure zvaitarisirwa." Luo Tiejun akati, "Imwe pfungwa inokosha ndeyekugadzirisa-kudivi dhizaini yekugadzirisa. Mumakore mashoma apfuura, makambani esimbi akaita mari uye hupfumi hwavo hwakavandudzika zvikuru. ”
Luo Tiejun anotenda kuti indasitiri yesimbi yakaratidzira masimba akasimba ekudzivirira njodzi nekuda kwekufambira mberi kusingazungunuke kwekushambadzira-padivi dhizaini dhizaini uye yakazara yakazara maindasitiri emaketani mabhenefiti akaunganidzwa pamusoro pemakore.
Aya mabhenefiti achasimbiswa mu2020 apo denda repasirese riri kupararira. Mu2020, kune rumwe rutivi, indasitiri yesimbi yenyika yangu yakaita basa rakakosha mukupa zvechimbichimbi, rubatsiro rwekurapa, kutangazve kwebasa uye kugadzirwa, uye kugadzikana kwecheni yezvigadzirwa zvekutengesa; kune rimwe divi, kudiwa uye kugadzirwa vhoriyamu yeChina indasitiri yesimbi zvese zvakarova marekodhi Panguva imwechete, zvakatungamira mukuwedzera kwakakura kwekupinza simbi, uye danho rakapinza rekupinza simbi isina kuchena rakatanga kuumbwa kubva muna Chikumi.
"Senyika huru inoburitsa simbi pasi rose, China haina kungoisa chete simba rekugadzira pasirese, asi yakapa musika wakakura wekugaya huwandu hwesimbi hwekugadzira pasimbi," akadaro Luo Tiejun.
Tichitarisa kumashure kune yakasarudzika 2020, kugadzirwa kwesimbi kwenyika yangu kwakaramba kuchimhanya padanho repamusoro rinotungamirwa nesimba rakadzika rekudzika, zvichiratidza kusimba kwakasimba kwehupfumi hwenyika yangu; panguva imwecheteyo, mutengo wesimbi wakatorwa kunze kwenyika wakachinja zvakanyanya, zvakare uchirova marwadzo eindasitiri. Mufaro nekushushikana kwesimbi nesimbi indasitiri ingori nhoroondo yekupinda kwenyika yangu muchikamu chitsva chebudiriro uye shanduko nyowani mumikana nematambudziko.
Wakamira panzvimbo nyowani yekutanga kwe "14th mashanu-egore Hurongwa", indasitiri yesimbi ingaita sei zvikanganiso zvayo uye kutanga kwakanaka?
Luo Tiejun akataura kuti chishuwo chekuwedzera kwekugona, zvipingamupinyi zvinowedzera kusimba kwezvakatipoteredza, kutsamira kwakanyanya kune zviwanikwa zvekunze, uye yakadzika indasitiri kusungwa zvicharamba zvichiri matambudziko akatarisana neindasitiri yesimbi kwenguva inotevera. "Indasitiri yesimbi ichine zvikanganiso zvekugadzirisa mukumhanyisa kuvaka kwemaindasitiri ekugona kugona uye kuvaka ketani yemazuva ano emaindasitiri."
“Kugonesa marongero emaindasitiri kwakakosha zvikuru kusimbisa hwaro hwemaindasitiri. Nekuda kwezvimhingamipinyi zvezvivakwa zvesimbi, mumakore achangopfuura, makambani esimbi emunyika yangu anonyanya kuda kusimukira mumahombekombe. ” Luo Tiejun akati, iyi ndiyo nharaunda yemahombekombe mamiriro echiteshi, mitengo yezvinhu, uye mbishi zvinhu zvinovimbisa Mhedzisiro isingadzivisike yezvakanaka zvakawanda senge kugona kwenzvimbo.
Asi akataura zvakare kuti kugadzirisa mamiriro eindasitiri yesimbi nesimbi indasitiri haigone "kufushirwa." Iyo yepazasi mutsetse inofanirwa kuve yedunhu musika inoda nzvimbo uye zviwanikwa uye kugona kwezvakatipoteredza, uye chiyero cheyese indasitiri dhizaini inofanirwa kutariswa zvichienderana nekuti kumusoro nekuzasi kweketani reindasitiri kunogona kubatanidzwa zvizere.
"Indasitiri yesimbi inofanirwa kushandura pfungwa yechinyakare yekuzvigutsa, kudzikisira kutengeswa kwezvinhu zvakajairika, kukurudzira kuunzwa kwezvinhu zvakagadzirwa nesimbi semabhiridha, uye kudzora simba nesimbi yekushandisa." Luo Tiejun akataura kuti indasitiri yesimbi ichawedzera kugovera-padivi dhizaini dhizaini uye kutsinga kutsikirira kudzikiswa. Isina kugadzirwa simbi yekugona kugona, yakadzika kurima girini uye yakaderera-kabhoni nzira yekuvandudza, inotungamira nyowani yekumba yekupa uye yekuda chiyero neakakwira mhando kupa, uye kutora chikamu mune-epamusoro nhanho kubatana kwepasirese uye makwikwi.
Luo Tiejun akataura kuti pamwe nekuunzwa kwenhevedzano yemitemo inoenderana nekuvandudzwa kwesystem senge kutsiviwa kwesimba, kupinzwa kwezvinhu zvakagadziriswa simbi mbishi, uye kukwira kabhoni, indasitiri yesimbi neyesimbi inofanirwa kushandisa nzira dzekusimudzira kubatana nekubatanidzwazve nekuvandudza kudzokorodza system yezvimedu simbi zviwanikwa kuti zvine hungwaru kuendesa kumahombekombe uye mukati menyika nzvimbo. Kugona kugona, zvakadzikama kusimudzira nyika dzese kugadzirwa kwekudyidzana kudyidzana, zvishoma nezvishoma kunatsiridza hunyanzvi hunyanzvi hweindasitiri uye nhanho yemazuva ano yecheni yeindasitiri, uye shandisa hunyanzvi hwesainzi uye tekinoroji sesimba rakakosha rekuvandudza mhando uye padanho rekugovera, kuitira kuti simbi yakanaka inogona kushandiswa se "blade".
Kutarisana neramangwana, chii chinonzi "chipenga" cheindasitiri yesimbi?
Luo Tiejun akataura kuti zvakafanira kutora mikana zvichibva pahurongwa hwekuwedzera kudiwa kwemhuri. Nekuvandudzwa kwesimba kwe5G + indasitiri yeInternet, kudyara kwenyika yangu muzvivakwa zvitsva uye kugadzirwa kwepamberi kuri kuramba kuchiwedzera, izvo zvinoramba zvichikonzera kukurudzira kutsva kwesimbi inodikanwa mumahombekombe esimbi enzivi senge mota, midziyo yemumba, uye zvigadzirwa zvehungwaru.
"Kubatanidzwa pamwe nekugadziriswazve kwemaketani akakwira kumusoro uye ezasi emakambani indasitiri chinhu chitsva chinodiwa cheindasitiri yesimbi kuti ivone kuvandudzwa kwemaindasitiri pasi pechirongwa chitsva chekuvandudza." Luo Tiejun akasimbisa kuti zvakafanira kumhanyisa kubatanidza uye kuronga patsva mukati meindasitiri, uye nekuenderera mberi nekusimudzira kubatana pamwe nevekumusoro nekudzika kwemabhizinesi muketani yeindasitiri kusimbisa akadzika ekudzika emakambani uye ekutsvagisa masangano anoshanda pamwe kuti agadzirise kusangana nekusingaperi kuri kuwedzera zvinodiwa nevashandisi uye kuwedzera uye kusimbisa maindasitiri cheni.
Akataura kuti "Belt uye Road Initiative" inotungamira kune yakakwira nhanho yekuvhura, uye zvakare inounza mikana mitsva kumakambani esimbi "kuenda pasi rose". Iyo indasitiri yesimbi ine hunhu hwekukwirisa kwekudyara uye kusimba kwakakosha kwemaindasitiri, uye inhengo inokosheswa mukuvaka kwepamusoro kubatana kwe "Bhandi nemugwagwa".
"Kubatana kwekudyidzana kwepasi rose ndiyo imwe yenzira dzakakosha dzeindasitiri yesimbi yeChina kutsvaga shanduko nekuvandudza." Luo Tiejun akataura kuti makambani esimbi anofanirwa kunyatsonzwisisa mukana wekuumba patsva maindasitiri emaketani, uye panguva imwechete vachiongorora nzvimbo yekudyidzana kwepasi rose, kuwedzera kubatana pamwe nekubatana, uye kuona kumisidzana, kusimbisa kudzivirira njodzi, uye kuyedza kugadzira nyowani dzemunyika makwikwi mabhenefiti ane epamusoro-chikamu epasirese kugadzirwa kugona kugona.